समाचार Archives - Tanahu Post
काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमले अहिलेको तरिकाले सरकार चले त्यसले आगामी निर्वाचनमा नेकपालाई गम्भिर धक्का लाग्ने बताएका छन् । पार्टी स्थायी कमिटीमा आफ्नो तर्फबाट छुट्टै प्रतिवेदन पेश गर्दै नेता गौतमले दुईतिहाई बहुमतको सरकार आफैंलाई च्याप्न थालेको उल्लेख गरेका छन् । पार्टी र सरकारलाई गम्भिर ढंगले अगाडि बढाउन र सिंगो पार्टी पंक्तिको ध्यानकर्षणका लागि दस्तावेज पेश गरेको नेता गौतमले बताएका छन् । सरकारको गतिहिनता साथै पार्टीमा संगठनात्मक शुन्यताले ७ लाख पार्टी सदस्य शुभचिन्तकमा कुण्ठा, निराशा र हतोत्साह देखा पर्न थालेको नेता गौतमको भनाई छ । पार्टीले कार्यकर्तालाई अलपत्र पारेको गौतमको प्रतिवेदनमा छ । चुनावमा बागठबनधनलाई भोट हालेका ५० लाख मतदाताले नेकपा खोज्दै आँखा घुमाएपनि कतै नदेख्ने अवस्था आएको गौतमको भनाई छ । गौतमका अनुसार पार्टीले सरकार चलाएको
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला न्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौलाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। ठगी मुद्दा मिलाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग ८० हजार घुस मागेको अभियोग निरौलामाथि लागेको छ। यस्तै कम्पनी रजिष्टार कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा करार सेवामा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर पूर्णचन्द्र आत्रेयलाई सात हजार घुस लिँदा लिँदै गरेको अवस्थामा आयोगको टोलीले शुक्रबार पक्राउ गरेको हो। शेयरधनीको लगत अभिलेख तथा कम्पनी अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि कम्प्युटर अपरेटर आत्रेयले घुस माग मागेको अभियोग लागेको छ। आरोपी आत्रेयमाथि छानबिन भइरहेको आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले जानकारी दिए ।अन्नपुर्ण पोस्ट
सप्तरी : प्रतिनिधिसभा सदस्य चन्द्रकान्त चौधरीले ५ करोड रुपैयाँ पर्ने १० कट्ठा जग्गा दान गरेका छन्। सांसद चौधरीले सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका कार्यालयका लागि जग्गा उपलब्ध गराएका हुन्। पातो बजारस्थित जग्गाको लालपुर्जा मंगलबार उनले मेयर शिवनारायण साहलाई हस्तान्तरण गरे। उक्त अवसरमा उनलाई नगरपालिका र स्थानीयले अभिनन्दन गरेका थिए। ‘आफ्ना लागि त सबैले जोड्छन्’, उनले भने, ‘समाज र राष्ट्रका लागि पो सकेको योगदान गर्नुपर्छ।’ बाल्यकालमा राजा हरिश्चन्द्रको नाटकबाट प्रभावित भएकाले दान गर्न उत्साहित हुने गरेको उनको भनाइ छ। सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने हो भने आफूसँग बाँकी जमिन पनि दान गर्न तयार रहेको उनले बताए। ‘७२ बिघा जग्गा दान गरिसकेको छु’, उनले भने, ‘मसँग १० बिघा जमिन बाँकी छ।’ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लिन सप्तरी, सिरहाका जनतालाई प्रदेश १ जानुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो उनले गरे। उपप्
काठमाडौं : २२ मंसिरको सचिवालय बैठक नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा पार्टी पंक्तिको निम्ति सम्भवतः अप्रत्याशित रहयो। वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठक बहिस्कार गरे। नेतृत्वमा बैठकप्रति देखिएको उदासिनता, विधि प्रक्रिया नमानिएको भन्दै उनीहरूले आरोप लगाउँदै आएका थिए। बैठक बहिस्कारमा ‘समय पालना’लाई कारण देखाए पनि उनीहरूले अन्य कारण खुलाएका छैनन्। घटनाको भोलिपल्टै २३ मंसिरमा नेपाल–खनाल पक्षले आफूनिकट स्थायी समिति बैठक बोलाउन गरेको ‘प्रयास’ २९ मंसिरमा बोलाएर ओली–दाहालले तुहाइदिए। यसपछि ओली–नेपालबीच दूरी अझै बढेको छ। प्रदेश कमिटी पदाधिकारी चयनदेखि नै तत्कालीन एमालेका ओली र नेपाल खेमाबीच असमझदारी बढ्दै गएको छ। एउटै विमानका दुई पाइलटमध्ये एक (ओली)को ‘कमान्ड’ हल्लाउन नेपाल, खनाल र गौतमको ‘विपरीत ध्रुवको गठबन्धन’ भएको छ। यो गठबन्धन
काठमाडौं : एपीवान टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल आइडल-२ मा उत्कृष्ट चारको बिहीबारको प्रस्तुति विशेष रह्यो। यिनै चारबाट अर्को साता नेपाल आइडलको विजेता घोषणा गरिनेछ। बिहीबार नेपाल आइडलको मञ्च चिटिक्क परेको थियो। विक्रम बराल, रवि ओड, सुमित पाठक र अस्मिता अधिकारी ढाकाको पहिरनमा सजिएका थिए। ड्यासमा बसेका जज पनि ढाका मिश्रित पहिरनमा आकर्षक देखिएका थिए। कार्यक्रमकी सञ्चालिका रिमा विश्वकर्मा ढाकाको लामो गाउनमा सजिएकी थिइन् भने आसिफ शाहले ढाकाकै कोटमा नेपालीपन झल्काएका थिए। कार्यक्रमको सुरुआतमा रेडियो नेपालकी प्रथम गायिका रानुदेवी अधिकारीको शुभकामना सन्देशको भिडियो क्लिप प्रदर्शन गरिएको थियो। जजहरू कालीप्रसाद बास्कोटा, न्ह्यु वज्राचार्य र इन्दिरा जोशीले पनि गीत गाएर कार्यक्रमको रौनक बढाएका थिए। उत्कृष्ट चारको अब्बल प्रस्तुतिमा दर्शकहरू झुमिरहेका थिए। हरेक प्रतियोगीले दुईवटा गी
केही समयमा घर फर्किंदा आगोले खायो तीन सन्तान..हे दैब ति बाबा आमालाई के बितेको होला !!
दाङ : बंगलाचुली–८ गुराँसेकी जिवना पुन बिहीबार साँझ तीन सन्तानलाई घरमा बसालेर बिरामी छोरोलाई झारफुक गर्न बाहिर गएकी थिइन्। उनले बिरामीलाई सञ्चो गराउन त सकिनन् नै घरमा छाडेका तीन सन्तानसमेत गुमाउनुपर्‍यो। ‘छोरोको उपचारका लागि गाउँ जाँदा घरमा सोलारको ब्याट्री पड्किएर आगलागी भएछ’, उनले भनिन्, ‘मेरो सर्वस्व गुम्यो। घरभित्र रहेका तीन सन्तान आगोमा जले।’ आफू घरबाहिर रहेकाले उनीहरूलाई बचाउन नसकेको दुखेसो उनले गरिन्। उनी घर आउँदा सन्तान पनि थिएनन् र सम्पत्ति बाँकी थिएन। उनका श्रीमान् नवराज रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा छन्। गाउँबाट केही समयमा घर फर्किंदा आगलागी भएको देख्दा उनको होस उड्यो। उनले चुकुल लगाएर बस्न भन्दै छोराछोरीलाई घरमा छाडेकी थिइन्। उनका सात वर्षका छोरा कृष्णबहादुर, छोरीहरू पाँच वर्षकी अस्मिता र दुई वर्षकी अञ्जु पुनले ज्यान गुमाएका हुन्। उनीहरूको शवसमेत फेला परेको छैन। ‘एउ
Breaking news !नुवाकोटमा मिनिट्रक डरलाग्दो गरि दुर्घटना, ‘३० जनाको मृत्यु’
काठमान्डौ , मंसिर २८ । नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका घ्याङफेदीमा शुक्रबार मिनिट्रक दुर्घटना हुँदा ३० जनाको मृत्यु भएको छ ।अनुमानित ४० जना यात्री बोकेर दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको सिसिपु जाँदै गरेको मिनिट्रक घ्याङडाँडाको भीरबाट करिब ४०० मिटर तल खसेको स्थानीय लालबहादुर तामाङले जानकारी दिएका छन् ।तामाङका अनुसार दुर्घटनामा ३० जनाको ज्यान गएको छ । शिखरबेसीस्थित घ्यावामा गएर फर्किएकाहरु दुर्घटनामा परेका हुन् । ध्याङफेदि सिसिफुबाट वडा नम्बर ७ सिम्टाङ फर्किदैं गरेको बा३ख ३९१३ नम्बरको गाडी दुर्घटना भएको हो ।४६ जना सवार गाडी दुर्घटना हुँदा ३० जनाभन्दा बढिको मृत्यु भएको दुप्चेश्वर गाउँपालिका उपाध्यक्ष अञ्जु आचार्यले पुष्टी गरिन ।घटनाबारे जानकारी पाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटमा डीएसपी भीमलाल भट्टराईको टोली दुर्घटनास्थलतर्फ गएको छ ।दुर्घटनास्थल पुग्न सदरमुकाम विदुरदेखि साढे ३ घण्
तुलसीपुरको एक जुत्ता चप्पल पसलमा आगलागी भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ स्थित रतननाथ टोलको अन्नपूर्ण ट्रेडर्स जुत्ता चप्पलको होलसेल पसलमा आगलागी भएको छ। शुक्रबार बिहान साढे ५ बजेदेखि आगो लागेको स्थानीयले बताएका छन्। आगो लाग्नुको कारण थाहा नभए पनि विद्युत सर्ट भएर आगो लागेको अनुमान गरिएको छ। आगो निभाउन नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी खटिएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको एउटा दमकल, स्काभेटरको प्रयोगले आगो निभाउन प्रयास भइरहेको पनि त्यो सार्थक भने हुन सकेको छैन। एउटा मात्रै दमकल हुन र त्यसको पानी पुर्‍याउन नसक्नुले आगो निभाउन नसकिएको स्थानीयले बताएका छन्। यसैबीच घोराही उपमहानगरपालिकाको दमकल समेत साहेतको लागि तुलसीपुर आउन लागेको जानकारी दिइएको छ । बाक्लो घरहरु रहेको हुँदा आसपासका घरहरुमा समेत आगो फैलन नपावस भनेर प्रयास भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।सेतोपाटि
नुवाकोट — दुप्चेश्वर गाउँपालिका १ घ्याङडाँडामा मिनी ट्रक गाडी दुर्घटना हुँदा १६ जनाको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार साँझ भएको दुर्घटनामा १६ जनाको मृत्यु भएको घटनास्थलबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक ज्ञानलाल यादवले जानकारी दिए । मृतकको सनाखत भएको छैन। उद्धारका लागि जिल्लाबाट प्रहरी टोली आइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय समुद्रटारका इञ्चार्जसमेत रहेका यादवले बताए। ३९१३ नम्बरको ट्रक सडकबाट करिब एक हजार मिटर तल नदीमा खसेको छ। गाडी किम्ताङबाट सिसिपु जाँदै गर्दा दुर्घनामा परेको हो। प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बसन्तबहादुरले कान्तिपुरसित भने, 'दुर्घटनामा व्यापक मानवीय क्षति भएको र अहिलेसम्म ४/५ जनाको शव भेटिइसकेको छ।' शिखरबेंसीबाट सिसिकु जाँदै गरेको ट्रक दुर्घटनामा परेको हो। स्थानीयका अनुसार ट्रकमा ४०/४५ सवार थिए।कान्तिपुर
काठमाडौँ । नेपाल आज पनि विकासको पथमा हिडिरहेको देश हो । नेपालमा प्रर्याप्त सम्भावना भएर पनि त्यसको उचित सदुपयोग हुन नसकेको कारणले गर्दा आजको दिनमा नेपाल विकासमा केही पछाडी पर्न गएको छ । नेपालमा लामो समय राजनीतिक अस्थिरता भोगेको नेपाल युद्धका कारण पुस्तौं पछाडी पर्न गएको हो । अहिले नेपाल विकास हुने क्रममा रहेको छ । अहिले चक्रपथको कलंकी–कोटेश्वर सडक खण्डको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चीन सरकारको सहयोगमा सञ्चालित उक्त सडक खण्डको सुधारको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको काठमाडौँ चक्रपथ सुधार योजनाले जनाएको छ । सो खण्डमा जेब्रा क्रस र आकाशे पुल पर्याप्त नभएकाले पैदल यात्रीले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको भन्दै गुनासो आएपछि सुधारका कामलाई तीव्रता दिइएको छ । सरकारले बालकुमारी, सातदोबाटो, महालक्ष्मीस्थान, एकान्तकुना, सानेपा र बल्खु गरी ६ स्थानमा आकाशे पुल निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ ।जनबोली